Ngabe amakhamera agqoke umzimba asize kanjani ezomthetho? | Izixazululo ze-OMG
Ngabe amakhamera agqoke umzimba asize kanjani ezomthetho?
Amakhamera agqokwa ngomzimba abukwe njengenye yezindlela zokubhekana nezinselelo futhi athuthukise ukusebenza komthetho ikakhulukazi. Ubuchwepheshe, obungabekwa ezibukweni zasesandleni noma esifubeni senduna, bunikeza imininingwane yesikhathi sangempela lapho isetshenziswa yizikhulu ekuhambeni noma kwezinye izabelo ezibenza bahlangane namalungu omphakathi. Enye inzuzo yamakhamera agqokwa ngumzimba yikhono lawo lokuhlinzeka ngokuphoqelelwa komthetho ngethuluzi lokubheka ukukhuthaza ukuphepha nokusebenza kahle kwephoyisa futhi livimbela nobugebengu.
"Ama-ejensi okuqinisa umthetho kulo lonke elaseMelika kanye nasemhlabeni jikelele asebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba (i-BWCs) njengethuluzi elithembisayo lokwenza ngcono imiphumela yobufakazi, futhi athuthukise ukuphepha, nokwenza ngcono ukusebenzisana phakathi kwezikhulu, izikhulu nomphakathi. Ama-BWC futhi abonakala eyithuluzi elibalulekile lokusiza ukuqashwa kwezomthetho kabanzi, ukuxazulula izinkinga, kanye namasu wokuzibandakanya komphakathi ngaphakathi kwezomthetho. ”Kusho Bureau of Justice Aid
Ukusetshenziswa okusheshayo kwamakhamera agqokwa ngomzimba kuye kwabonwa eminyakeni eyishumi edlule e-US. Amalungu omphakathi jikelele ayaqhubeka nokwamukela ezobuchwepheshe. Ucwaningo lwamanje lukhombisa ukuthi amakhamera agqokwa ngomzimba anikeza izinzuzo zokusebenzisa umthetho, kepha ucwaningo olwengeziwe luyadingeka ukuze uqonde ngokugcwele ukubaluleka kobuchwepheshe bensimu. Kulesi sihloko, kucaciswa ukuthi amakhamera agqokwa ngomzimba asiza kanjani abomthetho.
Izinzuzo Zamakhamera Omzimba Ojwayelekile
Ukwemukelwa kanye nokufakwa kwamakhamera agqokwa ngumzimba kunikeze abezomthetho usizo olukhulu. Ezinye izinzuzo ezinkulu zokusebenzisa lobu buchwepheshe yilezi:
Khuphula ukuzethemba komphakathi maqondana namaphoyisa endawo
Inani elincane lezikhalazo libhaliselwe amapholisa noma omunye umenzeli womthetho
I-Pleas yasekuqaleni Yokuqala ngenxa yobufakazi obunamandla bokuqhafaza
Ukuncishiswa kokuhlaselwa kwamaphoyisa
I-BWC (Amakhamera Worn Womzimba) asibekela lezo zindawo lapho i-CCTV ingabekwa khona
Ukuthuthukiswa kwamakhono kwabaphathi ngemuva kokubukeza ukuthi bebanjani enkundleni.
Amakhamera agqokwa ngomzimba anezinzuzo eziningi aziswa ngokugcwele ngamaphoyisa omphakathi nawamaphoyisa okwenza kube nomthetho ongcono nendawo yokuhleleka.
Enye yezinzuzo eziphambili ze-Body Worn Camera ukuthi zinikeza ubufakazi obanele obungabanjwa njengobufakazi obungenakuphikwa enkantolo futhi busiza ukushushiswa okungcono. Ngokubutha okunjalo kobufakazi izinhlobo ezithile zamaphrothokholi ziyagcinwa:
Ukusetshenziswa kwamadivayisi afakiwe
Azikho izici zokususa nokuhlela ezitholakala kulezi cams
Ukususwa okuzenzakalelayo kwe-footage ngemuva kwezinsuku ze-31
Amandla wokugcina ama-footage adingekayo
Umkhondo wokucwaninga okugcwele
Amakhamera agqokwa ngomzimba angaholela ekuveleni okungcono nasekuziphenduleni futhi ngaleyo ndlela asize futhi athuthukise ukusebenza komthetho. Kuyabonakala ukuthi emiphakathini eminingi kunokungathembani phakathi kwabendawo nabasebenza umthetho. Lokhu kungathembani kuyanda lapho kunemibuzo ephathelene nokusetshenziswa kwamandla abulalayo noma angenakubulala. Ukubhalwa kwevidiyo okuthweywe phakathi nalokhu kuhlangana kwamaphoyisa nomphakathi kungahlinzeka ngemibhalo engcono yokusiza uqinisekise uhlobo lwemicimbi nama-akhawunti okusekela aqoshwe yizikhulu nabahlali bomphakathi.
Kuyabonakala ukuthi izakhamizi zivunyelwe ukuyalula imiyalo yamaphoyisa ngesikhathi sokuhlangana. Izakhamizi zivame ukuguqula isimilo sazo lapho zazi ukuthi ziyaqoshwa. Isiza ukuqiniswa komthetho ngendlela yokuthi ukuhlangana kwezinga eliphansi kuxazululwe kalula kunokuba kukhuphukele ohlotsheni lapho kudingeka khona amandla.
Ngisho nokusikisela kokuthi kukhona umuntu osibhekile kuvame ukusithonya. E-2011, abacwaningi baseNewcastle University eNgilandi bathumela izithombe zamehlo eduna kanye ne-caption,
"Izihlobo zeCycle: Siyakubheka."
Ukwebiwa kwebhayisikili kwehle ngamaphesenti we-62 kulezo zindawo - hhayi kwenye indawo.
Ukuqaliswa kwamasu amasha angcono:
Ukuvezwa kwevidiyo ekhamera egqokwa ngumzimba kunganikeza abaphathi bezomthetho idatha eyanele yokuphoqelela amasu amasha ahlanganiswe kangcono ukuthola ukwethenjwa komphakathi kanye nokuqiniswa komthetho okungcono kulowo mphakathi.
Imiphumela esheshayo nengcono:
Amakhamera agqokwa ngomzimba asheshisa izinga lokuxazululwa kwamacala lapho kusetshenziswa khona amandla ngokweqile noma ukungaziphathi kahle komenzeli womthetho. Uphenyo lwamacala abandakanya ama-akhawunti angavumelani wokuhlangana okuvela emaphoyiseni nasezakhamuzini kwesinye isikhathi kutholakala ukuthi “alunasisekelo” futhi luvalwe ngemuva kwalokho lapho kungekho video noma ofakazi abazimele noma abaqinisayo. Lokhu-ke kunganciphisa ukwethembana komphakathi ekuthembekeni komthetho futhi kwandise nemibono yokuthi izinsolo zokuhlukunyezwa okulethwe izikhulu ngeke zilungiswe kahle. Ividiyo ethumba amakhamera agqokwa ngumzimba ingasiza ekuqondiseni amaqiniso wokuhlangana futhi iholele ekuxazululeni ngokushesha.
Kuqinisa ukuzethemba kwephoyisa:
Phezu kokubaluleka kwenhlangano yamakhamera, izikhulu uqobo nazo zithole umphumela omuhle ngokugqoka amakhamera agqokwa ngomzimba nge-93% yamaphoyisa akholelwa ukuthi amakhamera omzimba asiza ngokubuthana kobufakazi kanye ne-80% yezikhulu ezizwa ukuthi zinamakhamera agqokwa ngomzimba kufanele abe yimpoqo.
Zimbalwa izikhalazo ezifakwe kumaphoyisa:
Ukwehla okukhulu kuyabonakala kwizikhalazo ezifakwe ezikhulwini ezazifakwe amakhamera agqokwa ngomzimba. Isibalo sezikhalazo esifakwe kumaphoyisa sehle kusuka kwizikhalazo ze0.7 koxhumana nabo be1,000 saya kwabakwa0.07 ngothintana nabo be1,000 njengoba kushicilelwa.
Yize konke lokhu okungenhla kugqamisa okuhle okuningi kokusebenzisa amakhamera agqokwe umzimba ngezicelo zamaphoyisa nezokuphoqelelwa komthetho, amakhamera ngokwawo akufanele athathwe 'njengenhlamvu yomlingo'. Amakhamera agqokwe umzimba angenye yamathuluzi amaningi angasetshenziswa ngohlaka lwesimanje lwamaphoyisa ukuze kuthuthukiswe ukusebenza nokuphepha.
Ngabe amakhamera agqoke umzimba asize kanjani ezomthetho? igcine ukuguqulwa: Septhemba 26th, 2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-3681 Ukubuka kwe-2 Namuhla